Zanakalahin’ny Mpanohitra Mpitarika Ny Hetsika Maitso Manohana Ny Fifanarahana Ara-nokleary Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2015 5:22 GMT
Manao tohi-vakana ireo Iraniana mpanohitra malaza maromaro maneho ny heviny am-pahibemaso mikasika ny fifampiraharahana ara-nokleary teo amin'i Iran sy ireo firenena enina matanjaka.
Mohammad Taghi Karoubi no farany indrindra, zanakalahin'i Mehdi Karoubi mpitarika ny Hetsika Maitso, iray amin'ireo kandidà reformista tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2009. Ambenana amin'ny trano iray i Mehdi Karoubi hatramin'ny taona 2011 noho ny fandraisany anjara tamin'ny rotaka nifandraika tamin'ny fifidianana 2009.
Matetika i Mohammad Taghi Karoubi mitondra tena ho toy ny mpitondra teny tsy ofisialin'ny rainy amin'ny haino aman-jery. Mpampianatra lalàna noraràna tsy hampianatra ao Iran izy, miaina an-tsesintany izy ankehitriny, ary mpikatroka mpanohana ny demokrasia. Namoaka lahatsary maharitra 30 segondra maneho ny fanohanany ny fifampiraharahana sy manantena hoavy mamiratra hoentin'izany ho an'ny Iraniana izy.
Fisaorana tamin'ny firaisankinany tamin'ny vahoakan'i Iran no maro amin'ireo fanehoan-kevitra nanohy ny tsanganana napetrak'i Karoubi tao amin'ny Facebook.
Zanakalahin'i Mehdi Karroubi, mpitarika ny hetsika maitso ambenana amin'ny trano iray nandritra ny efatra taona, manohana ny #IranDeal
Manatevin-daharana ireo Iraniana olo-malaza tsy mitsaha-mitombo manohana ny fifampiraharahana ara-nokleary ihany koa i Karoubi. Nizotra nankany amin'ny fahatanterahan'ny fifampiraharahana tao Vienna tamin'ny 14 Jolay, nangonin’ireo mpiara-miasa amin'ny Global Voices avy ao amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Hampanjakana ny Zon'olombelona ao Iran ireo fanambarana avy amin'ireo mpikamban'ny fiarahamonim-pirenena Iraniana manohana ilay fifanarahana.
Tamin'ny herinandro lasa teo no nosoniavin'ny [mg] olo-malaza iray tamin'ny hetsika fikatsaham-panavaozana tany amin'ny taona 1990, Ahmad Batebi, ny taratasy misokatra manohitra ilay fifanarahana ary niseho tamin'ny doka manameloka izany fifanarahana izany. Nanaraka azy akaiky ny lahatsary mampisongadina an'i Mohammedreza Jaleipour, mpanohana sy mpanao fampielezankevitr'i Hossein Mousavi tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2009, izay efa indroa voasambotra noho ny fifandraisany tamin'ny Hetsika Maitso.
[Mpikatroka Iraniana manohana ny demaokrasia aho, manohitra tanteraka ny fitaovam-piadiana nokleary aho ary manohana miaraka amin'ny ankamaroan'ny Iraniana avy amin'ny ankolafy politika maro ny fifanarahan'i Iran. Notazonina sy natoka-monina nandritra ny 5 volana aho noho ny fitarihana ny fanentanana reformista lehibe indrindra nanana tanora efa ho 500.000 mpanao fampielezankevitra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2009. Mihevitra aho fa fanitsakitsahana ny zo mahaolona ny vahoaka iraniana sy fisomparana ny fikarohana ny tsara kokoa sy ny azo antoka kokoa ary Iran demaokratika kokoa ny fanasaziana.]
Mpanohitra ara-politika manohana ny #IranDeal. Laharana 1. Mohammadreza Jalaeipour LAHATSARY/ https://t.co/VDRuKRyNd1 pic.twitter.com/VpzyN6k14i